अध्याय ६९ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जब मेरो इच्छा जारी हुन्छ, तब ज-जसले विरोध गर्ने साहस गर्छ अनि ज-जसले न्याय र शङ्का गर्ने साहस गर्छ, तिनीहरूलाई म तुरुन्तै छाँट्नेछु। आज, ज-जसले मेरो इच्छाअनुसार काम गर्दैन वा ज-जसले मेरो इच्छालाई गलत रूपले बुझ्छन्, तिनीहरूलाई मेरो राज्यबाट हटाइनुपर्छ र फ्याँकिनुपर्छ। मेरो राज्यमा अरू कोही पनि छैनन्, सबै मेरा पुत्रहरू हुन्—ती मानिसहरू जसलाई म प्रेम गर्छु अनि जसले मलाई वास्ता गर्छन्। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू मेरो वचनअनुसार काम गर्ने अनि सबै जातिहरू र मानिसहरूलाई मेरो पक्षमा न्याय गर्न शक्तिमा राज्य गर्न सक्छन्। यसको साथै, तिनीहरू ज्येष्ठ पुत्रहरू हुन्, जो निर्दोष र जीवन्त छन्, सरल र खुला छन्, अनि इमान्दार र बुद्धिमान दुवै छन्। मेरो इच्छा तिमीहरूमा पूरा हुन्छ, अनि जुन कुरा गर्न म चाहन्छु, त्यो तिमीहरूमा कुनै गल्तीविना, पूर्ण रूपमा खुला र प्रकट भएको अवस्थामा पूरा हुन्छ। गलत अभिप्राय र उद्देश्यहरू भएकाहरूलाई, मैले परित्याग गर्न सुरु गरेको छु, अनि म तिनीहरूलाई एक-एक गरेर ढल्ने तुल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई एक-एक गरेर त्यस बिन्दुसम्म नष्ट गर्नेछु कि तिनीहरू बाँच्न सक्दैनन्—अनि यसले तिनीहरूको आत्मा, तिनीहरू प्राण र तिनीहरूको शरीरलाई जनाउँछ।
मेरा हातका क्रियाहरूलाई बुझ—गरिबलाई सहायता गर्नु, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई वास्ता र सुरक्षा गर्नु, अज्ञानी र जोशिलाहरूलाई बचाउनु जसले मेरो व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्दैनन्, मलाई विरोध गर्नेहरूलाई अनि जसले मसित सक्रिय रूपले सहकार्य गर्दैनन्, तिनीहरूलाई दण्ड दिनु—यी सबै कुराहरू मेरो वाणीहरूअनुसार एक-एक गरेर पुष्टि गरिनेछन्। के तँ मलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्ने व्यक्ति होस्? के तँ मेरो निम्ति आफैलाई विश्‍वासयोग्य ढङ्गले समर्पित गर्ने व्यक्ति होस्? के तँ मेरो वचनलाई ध्यान दिने र त्यसअनुसार काम गर्ने व्यक्ति होस्? के तँ मेरो विरुद्धको व्यक्ति होस् वा के तँ मेरो अनुरूपको व्यक्ति होस्? हृदयको गहिराईमा, के तँसित यी कुराहरूको बारेमा स्पष्ट ज्ञान छ? के मैले भनेको हरेक कुराको बारेमा तैँले उत्तर दिन सक्छस्? यदि तैँले उत्तर दिन सक्दैनस् भने, तँ उत्साहका साथ खोजी गर्ने व्यक्ति होइन तर मेरो इच्छालाई नबुझ्‍ने व्यक्ति होस्। त्यस्ता मानिसहरूले सजिलै मेरो व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्नेछन् र मेरो इच्छालाई गलत प्रकारले बुझ्‍नेछन्। यदि तिनीहरूसित एक क्षणको लागि पनि गलत अभिप्राय छ भने तिनीहरू मेरो छँटाइ र विनाशमा रहनेछन्।
ममा अन्त्यहीन रहस्यहरू छन्, जुन अथाह छन्। म मेरो योजनाअनुसार मानिसहरूलाई ती एक-एक गरेर प्रकट गरिदिनेछु। अर्थात्, म ती मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई प्रकट गरिदिनेछु। अविश्‍वासीहरू र मलाई विरोध गर्नेहरूलाई म तिनीहरूकै चालमा जानदिनेछु; तैपनि, अन्त्यमा, मैले तिनीहरूलाई म नै प्रताप र न्याय हुँ भन्‍ने कुरा बुझाउनुपर्छ। आजका अविश्‍वासीहरूसित तिनीहरूको आँखाको सामु जे हुन्छ, त्यसको मात्र ज्ञान हुन्छ, तापनि तिनीहरूले मेरो इच्छालाई जान्दैनन्। मेरा छोराहरूले—जसलाई म प्रेम गर्दछु—मात्र मेरो इच्छालाई जान्दछन् र बुझ्दछन्। मेरा छोराहरूका निम्ति, म खुल्लमखुल्ला प्रकट भएको छु; शैतानको निम्ति, म प्रताप र न्याय हुँ, अनि म लुकेको छँदै छैन। आजभोलि, केवल मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू मात्रै मेरो इच्छालाई जान्न योग्य छन्; अरू कोही पनि योग्यका छैनन्—अनि मैले सृष्टिअगावै यो सबै कुरालाई पूर्वव्यवस्थित गरेको थिएँ। सुरुमा, कसले आशिष पाउनेछन्, अनि कसले कोर्रा खानेछन् भनी मैले उचित रूपले व्यवस्थित गरेँ; म यसको बारेमा स्पष्ट थिएँ अनि आज यो पूर्ण रूपले प्रकट भएको छ: आशिषितहरूले आफ्ना आशिषहरूको आनन्द लिन सुरु गरिसकेका छन्, जबकि कोर्रा लगाइनेहरूले विपत्ति भोग्न सुरु गरिसकेका छन्। कोर्रा खान नचाहनेहरूले खानेछन् नै, किनकि यो मैले नै नियुक्त गरेँ, अनि मेरो प्रशासनिक आदेशहरूको हातहरूले नै यो व्यवस्थित गरेको हो। ठ्याक्कै, कस्तो प्रकारको व्यक्ति आशिषित हुन्छ, अनि कस्तो प्रकारको मानिसले कोर्रा खान्छ? मैले यी कुराहरू प्रकट गरिसकेको छु; यो तिमीहरूको निम्ति रहस्य होइन, बरु यो पूरै प्रकट भएको छ: मलाई स्वीकार गर्ने तर गलत अभिप्राय भएकाहरू; मलाई स्वीकार त गर्ने तर मलाई खोजी नगर्ने; मलाई चिन्‍ने तर ममा समर्पित नहुने, मलाई छल गर्न कुटिलता र धोकामा तल्लीन हुनेहरू; मेरा वचनहरू पढ्ने तर नकारात्मकता ओकल्‍नेहरू, अनि आफैलाई नचिन्‍नेहरू, आफू के हुँ भनेर नजान्‍नेहरू, आफैलाई महान् ठान्‍नेहरू, अनि आफू परिपक्वतामा पुगिसकेको छु भनी ठान्‍नेहरू (शैतानको उदाहरण)—त्यस्ता सबै व्यक्तिहरू कोर्राका पात्रहरू हुन्। मलाई स्वीकार गर्नेहरू अनि मेरो खातिर अभिप्राय बोक्‍नेहरू (अनि, यदि तिनीहरूले हस्तक्षेप गरे भने, म तिनीहरूका अपराधहरू सम्झनेछैन—तर तिनीहरूको अभिप्रायहरू ठीक हुनैपर्छ, अनि तिनीहरू सधैँ सचेत, होशियार हुनुपर्छ, स्वच्छन्द होइन; र तिनीहरूले सधैँ मेरो कुरा सुन्ने र मेरो अधीनमा रहने इच्छा राखिराख्‍नुपर्छ); शुद्धहरू; खुला मन भएकाहरू; इमानदारहरू; कुनै व्यक्ति, वस्तु वा मामलाद्वारा नियन्त्रित नहुनेहरू; र जीवनमा परिपक्व भए पनि हेर्दा बालक जस्तो देखिनेहरू—यिनीहरू नै मेरा प्रियहरू हुन्, मेरा आशिषका पात्रहरू हुन्। अहिले, तिमीहरू हरेकले तिमीहरूको अवस्थाअनुसार आफ्नो स्थान लिनुपर्छ। यसको साथै, तँ आशिषित होस् कि कोर्रा लगाइने होस् भनी तैँले जान्नेछस्; मैले यसलाई स्पष्ट भन्नु खाँचो छैन। आशिषितहरू आनन्दित हुनुपर्छ र खुशी हुनुपर्छ, जबकि कोर्रा भोग्‍नुपर्नेहरू व्याकुल हुनु हुँदैन। दुवै मेरो हातद्वारा मिलाइएका हुन्, यद्यपि म त्यसको दोषी होइन: यो मसित तिमीहरूको आफ्नै सक्रिय सहकार्यको अभाव, साथै म मानिसको अन्तस्करणलाई खोजी गर्ने परमेश्‍वर हुँ भनी बुझ्ने कार्यमा तिमीहरूको असफलता हो। मैले पहिले नै निर्धारित गरेको कुरा यही हो, अनि तैँले आफैलाई तेरो क्षुद्र छलकपटले हानि गरेको छस्; तैँले यो आफैमाथि ल्याइस्! तँ अधोलोकमा खस्नु भनेको तँलाई दुर्व्यवहार गरिएको होइन्! यो तेरो अन्त्य हो: यो तेरो परिणाम हो!
ज्येष्ठ पुत्रहरू धन्यका हुन्! झट्टै उठ र आनन्द मनाओ! झट्टै उठ र प्रशंसा देओ! आजदेखि, कुनै तीतोपना हुनेछैन अनि कुनै कष्ट हुनेछैन; सबै थोक हाम्रो हातमा छन्। जसका विचारहरू मसित सामञ्जस्यमा छन्, त्यो मैले प्रेम गर्ने व्यक्ति हो, अनि त्यसले कुनै विपत्ति भोग्नुपर्ने छैन। तेरो हृदयको इच्छा जेसुकै भएतापनि, म त्यसलाई पूरा गर्नेछु (यद्यपि, यो स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन); यो मेरो कार्य हो।
अघिल्लो: अध्याय ६८
अर्को: अध्याय ७०